HONOR 20 Lite ဈေးနှုန်း/သတ်မှတ်ချက်မျာ/ ဝေဖန်ချက်များ | HONOR မြန်မာ
MM ကုန်ပစ္စည်း Smartphone HONOR 20 Lite
AI ရှုခင်း ကင်မရာ
ရုပ်ပုံနှင့် သေးသယ်သောဘောင်း မျက်နှာပြင်
32MP Selfie Master, သင့်ရဲ့
နေစဉ်ဘဝတွင် မှော်အား ထည့်သွင်းလိုက်ပါ။
မည့်သည် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ဆုံရှုံခြင်းမရှိပဲ သင့်အကြိုက်ဆုံဓာတ်ပုံကိုိ ပိုစကာဆိုဒ်2.3×1.7m ထိပုံကြီးချဲ့ကြည့်လိုက်ပါ။*2. အဆိုပါ AI beautyတွင် သင့် selfieရိုက်ပြီးတိုင်း
AI နောက်ခံအလင်းတန်းပုံရိပ် နည်းပညာ,မည့်သည် အလင်းတန်းမဆို selfieကောင်းကောင်းရိုက်နိုင်။
AI နောက်ခံအလင်းတန်းပုံရိပ် နည်းပညာသည် သင့် selfieရိုက်ရာတွင် သဘာဝပုံစံဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေသည်။ထောင့်ဖက်ကဖြစ်ဖြစ် အရှေ့ဖက် သိုမဟုတ် နောက်ခံ အလင်းပြန်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၎င်းသည် မထင်မှတ်သော
စိုစိုလွင်လွင်နှင့် ကြည်လင်ပြတ်သာသော ပုံရိပ်များပေးသည်။ကျွန်တော်တို screen ring light-fillingနည်းပညာနှင့် 32MP ISO-တိုးမြင့် မှန်ဘီလူး ထောက်ပံပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို တစ်နေတာ့ မည်သည်အချိန်အခါမဆို လှပသော selfieအချိန်လေး ဖန်တီးပေးသည်။
24MP AI Triple-lens Rear Camera, သင့်ရဲ့တောက်ပမှုကို ဘယ်တော့မှ မမှေးမှိန်စေပါ။
အဓိက 24MP AI ကင်မရာသုံးလုံးကြောင့် သင့်ရဲ့ လျှပ်တစ်ပြတ် ခြေလမ်းတိုင်းကို အလွယ်တကူဖမ်းယူထားနိုင်ပါသည်။*3. f/1.8 wide-aperture lens and Quadra CFA sensor ကြောင့် ဘယ်အလင်းအောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်ကိုယ်ပိုင် ဓာတ်ပုံစတူဒီယိုရောက်နေလို ခံစားရမည်။ကျွမ်းကျင်သော ရိုက်ကူးရေးသမာလို ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ AI multi-scene recognition တွင်အမျိူးအစား ၂၂မျိုးနှင့် အခန်းကဏ္ဍ ၅၀၀တိုကိုခွဲခြားပေးနိုင်သည်။
17mm ultra wide-angle lens ကြောင့်ရှုခင်းများကို ပိုမိုဖမ်းယူနိုင်ပြီး သင်ကို ရှုပ်ထွေးကင်းမဲ့တဲ့ တစ်ကိုယ်ရေးပုံနှင့် အံအားသင့်စေသော ရှုခင်းပုံများကို ရိုက်ကူးပေးနိုင်သည်။
3D ကာလာပြောင်း,သင့်ရဲ့ တောက်ပမှုကို လှုပ်ရှားလိုက်ပါ
sophisticated 3D photolithography technologyကိုအသုံးပြုထားသည်။HONOR 20 Liteတွင်ကာလာအပေါ်အောက် လှုပ်ရှားတတ်သာdynamic prism-shapedနှင့် တလျှပ်လျှပ်သောအလင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ကျောဖက်တွင် သူလှုပ်ရှာတိုင်း အလင်းများကို တစ်တလျှပ်လျှပ်ဖြစ်ပေါ်။
သင့်ကြိုက်နှစ်သက်သော ဂိမ်းများအားလုံးကို သိမ်းထားနိုင်သည်။app အတွေ့အကြုံကို မွမ်းမံထားခြင်းနှင့် 12nm Kirin 710*1 နှင့် 4GB RAM.128GBဖြင့်သိုလှောင်ရာတွင် သင့်ကြိုက်သော ဗွီဒီယို၅၀၀ကျော်ထိ သိမ်းဆည်ထားနိုသည်။နောက်ထပ်512GBကို microSD ဖြင့်ထပ်တိုးနိုင်သည်။*5.
၆.၂၁လက်မ ဖုန်းမျက်နှာပြင်နှင့် DewDrop Notch*6, အားလုံး
မှန်မျက်နှာပြင်ပေါ်က ပုလဲလေးတစ်လုံး,dewdrop notchနှင့် ၉၀%အထက်ရှိသောscreen-to-body အချိုး*7. စိတ်နှစ်မြုပ်စေနိုင်သောမြင်ကွင်းနှင့် ဂိမ်းကစားအတွေအကြုံ,အားလုံး သင့်လက်ဖဝါးထည့်မှာ
ဂျာမနီ TüV Rheinland ပထမမျိုးဆက်သစ် eye comfort modeသည် screen ပေါ်မှ ထွက်ပေါ်သော အပြာအလင်းတန်းကိုလျော့ချစေပြီး မျက်စိကို ကာကွယ်ပေးသည်။မျက်စိ ပင်ပန်းဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးသည်။အထူးသဖြင့် အလင်းမှိန်းမှိန်သောနေရာ
နောက်ထက် အဆင့်သော ဂိမ်းခံစားမှု အတွေ့အကြုံ
GPU Turbo 2.0 တွင် နည်းပညာတော်လှန်သစ် ရုပ်ပုံလုပ်ဆောင်ချက် အရှိန်မြင့်နည်းပညာဖြင့်
ရုပ်ပုံလုပ်ဆောင်ချက်များကို မြန်ဆန်စေသည်။ဂိမ်းကစားရာတွင် ထေ့ငေါ့ခြင်းမရှိအောင် ပံပိုပေးသည်။*8.
Dual 4G SIM, တည်ငြိမ်သော အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို ပိုမိုကြည်လင်စေသည်။
AI ဓာတ်လှေကား စနစ် ၎င်းစနစ်တွင် သင့် ဓာတ်လှေကားအတွင်း၌ ရှိမရှိခွဲခြားပေးနိုင်သည်။
စက္ကန်းပိုင်းအတွင် 4Gလိုင်းတက်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည်။*9.
စမတ် မျက်နှာလော့ဖွင့် စနစ် နှင့် လက်ဗွေ လော့ဖွင်စနစ်
စမတ် မျက်နှာလော့ဖွင့်စနစ်သည် သင့်၏ မျက်လုံးမှိတ်သည် အချိန်ကို မှတ်သာပြီး သင့်၏ မျက်လုံဖွင့်တော့ လော့ဖွင့်ပေးသည်။၎င်းသည် ကျွန်တော်တိုကို လုံခြုံစိတ်ချမှုပေးစွမ်းနိုင်သည်။မျက်နှာလော့ဖွင့်စနစ် ဒေတာများကို သီးသန့်မှတ်သာသိုလှောင်ပေးထားသည်။သင့် အတွင်သီးသန့်သော လုံခြုံစိတ်ချရသော နေရာ။
Andriod 9စနစ်ကို အခြေခံထား၍,EMUI 9.0စနစ်တွင် ရှင်းလင်းမြင်သာသော မျက်နှာပြင်ပြုလုပ်ပေးထားသည်။ဒေတာစနစ် ထိန်းသိမ်းမှုများကို တိုးမြင့်ထားသည်။သုံးစွဲသူကို အဆင်ချောမွေ့အောင် မွမ်းမံထာသည်။*10.
ကျွန်တော်တို ကျန်မားရေးပိုင်းတွင် လက်ထောက်တစ်ယောက်ခန့်ထားသလို ၎င်းဖုန်းဖြင့် ဟင်းလျားများကိုဖတ်ပြီး ကယ်လိုရီများကို ဖော်ပြပေးသည်။သင့် ကယ်လိုရီတွက်ချက်ရမှာကို စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူး။*11.
AI ကယ်လိုရီ တွက်ချက်ပေးခြင်း
AI ဖြင့် အရာဝတ္တုများ ဖတ်ရှုပေးခြင်း
စက်ကို အကြိမ်ကြိမ်ဖွင့်ပိတ် စမ်းသပ်ခြင်း
အဖွင့်အပိတ်ကိုသေချာမှ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း 10,000 ကြိမ်
stand-by wake-up အကြိမ်ကြိမ်စမ်းသပ်ခြင်း
stand-by mode တွင်ပုံမှန်အနေအထားတွင် အသုံးပြုနိုင်အောင် စမ်းသပ်ခြင်း 100,000 ကြိမ်
ပါဝါခလုတ် 200,000 ကြိမ်
အသံခလုတ် 50,000 ကြိမ်
USBပေါက် ကြာရှည်ခံမှု စမ်းသပ်ခြင်း 10,000 ကြိမ်
နားကျပ်ပေါက် ကြာရှည်ခံ စမ်းသပ်ခြင်း 5,000 ကြိမ်
လက်ဗွေခလုတ် အထိအတွေ့ ကြာရှည်ခံ စမ်းသပ်ခြင်း 200,000 ကြိမ်
Touch screen အထိအတွေ ကြာရှည်ခံ စမ်းသပ်ခြင်း 800,000 ကြိမ်
ဖိအားခံ စမ်းသပ်ခြင်း 2,000 ကြိမ်
ငြိမ်သက် ဖိအားစမ်းသပ်ခြင်း 70 kg
အပူချိန်ဒဏ် စမ်းသပ်ခြင်း အပူချိန် ဒဏ် -40°C~70°C
ကြာမြင့်သော အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းစ စမ်းသပ်ခြင်း အပူချိန် 55°C/ စိုထိုင်းစ 95%
ကြာမြင့်သော အပူချိန်ထပ်ခါတစ်လဲလဲ စမ်းသပ်ခြင်း -20°C~55°C
*စမ်းသပ်ချက်များကို HONOR စမ်းသပ်ခန်းတွင် စမ်းသပ်ထားပါသည်။
၁.ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းနည်းပညာ ကွာဟမှုကြောင့် တစ်ချို ကိရိယာတွင် Kirin 710(သို့) Kirin 710Fများပါဝင်ထားသည်။
၂.အရှေ့ကင်မရာ 32MP ဖြင့်ရိုက်ကူသောဓာတ်ပုံတွင် ပိုစတာဆိုဒ် 2.3×1.7m (720dpi)ထိထုတ်ယူနိုင်သည်။
၃.နောက်ဘက်ကင်မရာကို ကင်မရာသုံးလုံးပေါင်းစပ်ထားသည်။၎င်းတွင်24MP ကာလာမှန်ဘီလူး,8MP ultra wide-angle မှန်ဘီလူး,2MP မှန်ဘီလူး.ဖုန်းဖြင့်ရိုက်ကူးရာ ပတ်ဝန်ကျင်မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
၄.4GB သိုလှောင်ခန်းသည် 4GB RAMကို ဆိုလိုပါသည်။၎င်းတွင်operating system နှင့်software များကြိုတင်ထည့်သွင်းထားခြင်းကြောင့် ဖုန်းတွင် 4GBအပြည်အဝမရှိနိုင်ပါ။
၅. သိုလှောင်ခန်းအကြီးအသေးသည် ROM128 ဖြင့်တိုင်းတာထားပါသည်။ဗီတီယိုဖိုင်ဆိုဒ် အကြီးအသေးသည် 198MB 720p HDဖြင့် တိုင်းတာထားသည်။သိုလှောင်းခန်း ဒေတာအချက်များကို HONOR's စမ်းသပ်ခန်းမှ ရရှိသော ရလဒ်ဖြစ်သည်။အပြောင်းအလဲများလဲ ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။
၆.HONOR 20 Lite သည် ထောင့်စက်ဝန်း ဒီဇိုင်းအသုံးပြုပေးထာသည်။မျက်နှာပြင် ထောင့်ဖြန်မျဉ်းသည်အရှည်သည် ၆.၂၁ လက်မရှိသည်။
၇.ဒေတာများသည် HONOR စမ်းသပ်ချက်ကိုအခြေခံထားသော ရလဒ်ဖြစ်သည်။
၈.GPU Turbo 2.0 တွင် လူကြိူက်များသော မိုးဘိုင်ဂိမ်းများကို သင့်လျော်အောင် ပြုပြင်ပေးထားသည်။ Arena of Valor, Vainglory, Mobile Legends, PUBG Mobile, Rules of Survivalလည်းပါဝင်ထားသည်။
ဖုန်းလိုင်းအားကောင်းမကောင်းသည် ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။
၁၀.တစ်ချိုလုပ်ဆောင်ချက်များသည် ရုရှားနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် ကနေဒါနိုင်ငံများတွင် မထောက်ပံပေးပါ။
၁၁.ကယ်လိုရီဒေတာများကို တတိယအဖွဲ့မှ ရရှိသော အချက်လက်ဖြစ်သည်။ဒေတာခန်းများ၏ပြောင်းလဲမှုအတိုင်းပြောင်းလဲ ပေးသည်။တိကျမှုသည် ကိုယ်တိုင်ဖတ်ထားသော ဟင်းလျာပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲသည်။လိုအပ်သော ကယ်လိုရီသည် အကြံပေးခြင်းတာဖြစ်သည်။ဆေးဖက်ဆိုင်ရာနှင့် ကုသရာတွင် အသုံးပြုရန် မဟုတ်ပါ။
၁၂.ဘလူးတုသ်ကိရိယာ ချိတ်ဆက်ရာတွင် နှစ်ခုချိတ်ဆက်ခြင်းကို အတည်ပြုပေးပါ။Setting > System > Developer Optionsသို့သွား၍ ရွေးချယ်ပေးပါ။၎င်းတွင်နောက်ထပ် တတိယ ကိရိယာ ချိတ်ဆက်မှုကိုရွေးပေးပါ။